15 फ्रिज कहिल्यै भण्डारण पर्छ भनेर खाद्य पदार्थ
हाम्रो समय मा, उत्पादनहरु ताजा राख्न कठिन छैन। प्रशीतन प्रणाली हाम्रो खाद्य अधिग्रहण पछि वा दुई दिन भित्र बेकम्मा हुनेछ भन्ने तथ्यलाई र बस रद्दीटोकरीमा टाढा उड खर्च मुद्रा चिन्ता गर्न सक्दैन। तर, खाना स्वाद परिवर्तन हुनेछ, किनभने फ्रिज भण्डार छैन पर्छ भनेर केही खाद्य पदार्थ हो। तपाईं खाना गुणस्तर परिवर्तन गर्दा झन् खराब। केही अवस्थामा चिसो स्टोर साँच्चै खतरनाक छ जो मोल्ड, योगदान पुग्छ। तल तपाईं निश्चित फ्रिज भण्डार छैन पर्छ भनेर खाद्य पदार्थ को एक सूची छ!
यो तरकारी यसलाई चाँडै यसको स्वाद गुमाउनु हुनेछ किनभने तपाईंको फ्रिज मा ठाँउ बाहिर स्पष्ट छ। कारण - फ्रिज मा सुन्दर हावा को पकने प्रक्रिया रोक्छ, त्यसैले स्वाद र गन्ध गायब। साथै, चिसो हावा भित्र झिल्ली नष्ट र तिनीहरूलाई mealy बनाउन, फल को बनावट असर गर्छ। तपाईंको टमाटर राख्न सबैभन्दा राम्रो तरिका - एक टोकरी वा भान्सा तालिका मा एक गिलास कचौरा तिनीहरूलाई राख्नु।
एक ठूलो समस्या - फ्रिज मा जडीबुटी को स्वाद र ताजगी संरक्षण। तुलसी नजिकका, खाना को odors अवशोषित गर्ने क्षमता छ। ताजा पानी क्षमता एक गुच्छा राख्नु यदि ताजा साग राख्न यो केही दिन हुन सक्छ। अर्को विकल्प - स्थिर। यो गर्न, घाँस खडा धोए, सुकेको र त्यसपछि milled, बैग मा जोडेको र फ्रीजर मा राखे।
ठूलो गल्ती - फ्रिज मा tubers राख्नुहोस्। चिसो आलु स्टार्च को प्रभाव अन्तर्गत चाँडै चीनी रूपान्तरित। यो एक सुन्दर, गाढा ठाउँमा कागज बैग मा आलु भण्डारण गर्न सबै भन्दा राम्रो छ। प्लास्टिक बैग तिनीहरू एयर लीक छैन किनभने, यस को लागि उपयुक्त छैनन्, र उत्पादन गुणस्तर चाँडै हराएको छ।
लसुन को भण्डारण कम समस्या छैन। फ्रिज मा एक ठाउँ पनि छ। nikih तापमान यो अङ्कुराउन र ढुसी लागेको बढ्न थाल्छ जब। यो एक सुन्दर र सुक्खा ठाउँमा हुनुपर्छ राख्नुहोस्।
उच्च आर्द्रता धनुष चाँडै, मुलायम खराब र ढुसी लागेको हुन्छ भन्ने तथ्यलाई तिर जान्छ। कसरी यसलाई फ्रिज मा, आलु बाट अलग मात्र भण्डारण गर्न एक सुन्दर, शुष्क ठाउँमा यो ठाँउ, तर। यो कि यी दुई उत्पादनहरु प्रत्येक अन्य र छिटो पोर्ट संग छिमेकी सहनु छैन साबित भएको छ।
यो विदेशी फल को भण्डारण, पनि, यसको आफ्नै quirks छ। तपाईं एक पाकेको अभोकाडो किनेको भने र एकैचोटि खाना लागि यसलाई प्रयोग गर्न चाहँदैनन्, र तपाईं फ्रिज मा राख्न सक्नुहुन्छ। तर यो नपाकेको छ भने, यो चिसो परिपक्वता रोकिनेछ।
अधिकांश मानिसहरू फ्रिज मा तेल भण्डारण कि सहमत थियो - खराब विचार। चिसो को प्रभाव अन्तर्गत यो condenses र थप घिउ resembling एक कठोर संरचना, बन्दछ। उत्पादन यसको स्वाद र रंग राख्ने त्यसैले, एक सुन्दर, गाढा ठाउँमा तेल को एक बोतल राख्न।
तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ कि ठूलो गल्ती को एक फ्रिज मा रोटी राख्नु भएको छ। यो पनि छिटो माथि सुक्खामा हुनेछ। सामान्यतया, रोटी तपाईं खान सक्नुहुन्छ र चार दिनको लागि राख्न र रोटी एक पटक स्थिर गर्न सकिन्छ। को फ्रीजर मा रोटी चिस्यान कायम रहन्छ भनेर ढुक्क हुन। को फ्रीजर बाहिर यसलाई लिएर तपाईं एक सैंडविच बनाउन अघि, बिस्तारै र पूर्ण Thaw गरौं।
कफी, साथै तुलसी रूपमा, फ्रिज भण्डार अन्य खाद्य पदार्थ को सबै odors अवशोषित। यो एक सुन्दर ठाउँमा सबै अलग राख्न। एक चरम अवस्थामा, यदि कफी तपाईं धेरै, तपाईँले यसलाई फ्रीजर मा राख्न सक्नुहुन्छ।
कुनै आवश्यकता छ फ्रिज मह राख्नुहोस्। यसलाई पूर्ण ढक्कन बन्द साथ एक जार मा संरक्षित छ। हामी फ्रिज राखेँ भने, यो बस सघन छ।
कागति, सुन्तला, कागती कोठा तापमान मा भान्सा तालिका मा राखिएको हुनुपर्छ। चिसो मा, तिनीहरूले आफ्नो गुण र स्वाद केही गुमाउनु। एकै समयमा, फल छैन दोश्रो सम्पर्कमा किनभने तिनीहरूले चाँडै ढुसी लागेको बन्न सक्छ आउँछन्।
समर्थित र मसालेदार तरकारी आफ्नो दीर्घकालीन भण्डारण गर्न योगदान जो सिरका, समावेश। त्यसैले एक ठंडा कोठामा लागि आवश्यकता छैन। एक चरम अवस्थामा, तपाईं लामो समय को लागि छोड्ने आवश्यक छ भने, तपाईं तिनीहरूलाई कक्ष मा एकाइ को ढोका मा राख्न सक्नुहुन्छ।
13 प्रोभेन्स जडीबुटी
वास्तवमा, त्यहाँ फ्रिज यी सुगन्धित जडीबुटी राख्न कुनै आवश्यकता छ। भन्दा आफ्नो एक पानी भरिएको ग्लास जार मा राख्नु, कम तापमान मा स्वाद मार्न र भान्सा तालिका तिनीहरूलाई भण्डारण गर्नुहोस्। त्यसैले, आफ्नो भान्सा थप सुन्दर हेर्न हुनेछ, र घाँस पनि यसलाई बुझ्न हुनेछ।
सस, मेयोनेज, आदि - जहाँ यो सलाद र मासु उत्पादन को लागि खाद्य पदार्थ राख्न राम्रो छ सबैले थाह घिउ वा सिरका आधारित भर्नु भान्सा तालिका मा फस्टाउँछन्। तर सस मेयोनेज, क्रीम वा दही मनमोहक फ्रिज मा राख्न।
छक्क छैन! केचप को पनि खुला बोतल सुरक्षित सामान्य तापमान मा एक कोठरी मा भण्डारण गर्न सकिन्छ। उनि भन्छन् यो उत्पादन, परिरक्षकों र सिरका को एक ठूलो रकम समावेश गर्छ, र किनभने आफ्नो रेफ्रिजरेटर को, र चिसो न त तातो न।
ठीक आफ्नो पर्ज र आफ्नो स्वास्थ्य भण्डारण गर्न हाम्रो सल्लाह सुन्न।
सुगन्धित thyme। उपयोगी गुणहरू तपाईंलाई आश्चर्य हुनेछ
वजन घटाने को लागि Linseed तेल: उपयोगी स्वादिष्ट हुन सक्छ
आहार व्यञ्जन बैगुन - उपयोगी र अविश्वसनीय स्वादिष्ट!
एक स्वस्थ शरीर कसरी सुरक्षित गर्न। फल
एक व्यापार योजना कसरी लेख्न: चरण निर्देशनहरूको द्वारा कदम। व्यापार योजना साना व्यवसायहरुको लागि
Acronis डिस्क निर्देशकसँग हार्ड डिस्क कसरी विभाजन गर्ने?
सुजुकी ग्रैंड भिटारा: नवाचारहरूको समीक्षा
सकेट - आवश्यक हरेक मोटरहाक्ने व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने कुरा
यो श्रृंखला "प्रतीक्षा सूची": अभिनेता र भूमिकाको, षड्यन्त्र, विवरण
Clathrus ruber: वर्णन, वासस्थानमा र मानव जीवनमा भूमिका
दूध, contraindications र प्रयोगको तरिका
खुशी साथ व्यापार: अदुवा पातलो संग ककटेल
VAZ-2130 इन्जिन: विशेषताहरु, सुविधाहरू